I-United Airlines ibonelela ngeekhowudi ze-PayPal QR njengenkqubo entsha yokuhlawula
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-United Airlines ibonelela ngeekhowudi ze-PayPal QR njengenkqubo entsha yokuhlawula
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Technology • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-United Airlines iba ngumphathi wokuqala womoya ukwazisa ngeekhowudi zePayPal QR njengokukhetha intlawulo yokukhanya - nge okanye ngaphandle kweWi-Fi.
Umrhumo wamva nje wokuhlawulwa ngaphandle kokuchukumisa uvumela abathengi ukuba bathenge amashwamshwam, iziselo, kunye nokunye ukuthengwa kokukhanya ngelixa besekhompyutheni ngokuskena nje ikhowudi ye-QR.
I-United Airlines abakhweli banokusebenzisa indlela entsha yokuhlawula ikhowudi ye-PayPal QR-nge-Wi-Fi okanye ngaphandle kwayo.
Ubambiswano luqala eChicago kwinyanga ezayo kwaye luya kukhutshwa banzi ngaphambi kokuphela konyaka.
I-United kunye ne-PayPal namhlanje babhengeze indlela entsha yokwenza ukuthengwa kokungafikeleli ngaphandle kokuchukumiseka, nakwiindawo ezingenayo iWi-Fi. Ukuqala kwinyanga ezayo, abathengi base-United kwiinqwelomoya ezikhethiweyo banokubonisa umgcini wenqwelomoya iKhowudi ye-PayPal QR kwi-app ye-PayPal kwaye bayisebenzise ukuthenga amashwamshwam, iziselo kunye nokunye ukuthengwa kokukhanya ngelixa ukhwele.
I-United iba yi-Airline yokuqala yokuzisa iikhowudi ze-PayPal QR njenge-Inflight Option
United Airlines yinkampani yokuqala yokuhamba ngeenqwelo-moya PayPal Iikhowudi ze-QR, kwaye obu bambiswano yinxalenye yokusebenziseka ngokulula kwe-United, indawo ehamba phambili kushishino lwezixhobo zokuhlawula ngaphandle konxibelelwano. I-United yayiyinqwelomoya yokuqala ukunika abathengi kwiikhabhathi zoqoqosho ukhetho loku-odola kwangaphambili amashwamshwam kunye neziselo kwi-airline's app nakwiwebhusayithi, kwaye ikwabonelela abathengi amandla okugcina ngokulula ulwazi lokuhlawula kwipaji yedijithali.
PayPal Iikhowudi zeQR zinokusetyenziswa kwiinqwelomoya ezikhethiweyo ezisuka kwisikhululo seenqwelomoya iChicago O 'Hare ngoNovemba naphambi kokuphela konyaka, ziya kuthi zande kuzo zonke iinqwelomoya kuzo zonke iinethiwekhi apho intlawulo yokunxibelelana ifumaneka.
"Umrhumo wethu wokuhlawula ngaphandle konxibelelwano wakhiwe ngokulula nangokukhetha kwaye yenye indlela yokuphucula amava e-United United," utshilo uToby Enqvist, igosa eliyintloko labathengi United Airlines. “I-PayPal liqabane eyoyikekayo kwaye obu buchwephesha bunika abathengi bethu enye indlela elula yokuthenga, nokuba abekho kwi-Intanethi. Silindele ukwazisa iinketho ezintsha nangakumbi ezintsha kubathengi bethu kwixa elizayo ngentsebenziswano yethu nePayPal. ”
Ukuba awukabikho, khuphela usetyenziso lwePayPal kwaye usete indlela oyikhethileyo yokuhlawula ikhowudi ye-QR, ngaphambi kokushiya isango.
Ukwenza ukuthengwa kokukhanya, Cofa kwindawo ethi 'Hlawula ngeekhowudi zeQR'.
Emva koko cofa indawo ethi 'Inqwelo yokuthenga ngaphakathi-moya'.
Bonisa ikhowudi ye-QR kumntu obalekela kwinqwelo-moya ukuze ayiskene.
Khangela irisithi yokuqinisekisa nge-imeyile xa ufika.
"Siyavuya ukuba sisebenzisana ne-United ukwazisa ukusebenza kweKhowudi ye-QR ngaphandle kweintanethi, esongeza ezinye iindlela zabathengi zokujonga ngePayPal kwiindawo ezininzi, ngakumbi kwiindawo ezingaxhunyiwe kwi-intanethi okanye kwindawo zonxibelelwano eziphantsi," utshilo uFrank Keller, uSekela Mongameli oPhezulu Izisombululo zezahlulo zamashishini kunye noRhwebo ngeDijithali kwi-PayPal. "Ukuzisa iikhowudi ze-PayPal QR kukhanyisa ukuzibophelela kwethu ekunikezeleni abathengi ukhetho kunye nokubonelela ngenqanaba elitsha lokungachukumisi abathengi xa besenza kuthengiso lwenqwelomoya, ngaphakathi kwenkqubo ye-PayPal abayaziyo nabayithembayo."
Oktobha 27, 2021 kwi-07: 27
Silindele ukwazisa iinketho ezintsha nezintsha ngakumbi kubathengi bethu. Inkampani yeenqwelomoya yayiyeyokuqala ukunika abakhweli bezoqoqosho ithuba loku-odola kwangethuba amashwamshwam kunye neziselo nge-app ye-United kunye newebhusayithi.